အကောင်းဆုံး Is ဘယ် - လေယာဉ်ခရီးသွားပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ရထားခရီးသွား? | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > အကောင်းဆုံး Is ဘယ် - လေယာဉ်ခရီးသွားပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်ရထားခရီးသွား?
ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမျိုးစုံ Modes သာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုနှိုင်းယှဉ်ရထားခရီးသွားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သို့သျောလညျး, အရာ mode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်? တွင် တစ်ဦးကရထား Save, ကျနော်တို့၏သင်တန်းဘက်လိုက်ဖြစ်ကြပြီးကြောင်းမီးရထားခရီးသွားလာဝေးအားဖြင့်သာလွန်သည်ထင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးအစား! မည်သည့်အရာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရထားခရီးသွားခြင်းနှင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များသို့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုရန်အောက်တွင်ဖတ်ပါ.
ယခုအခါလေကြောင်းခရီးသွားခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်လာသည့်အရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်. လွယ်ကူသောရှိပါတယ်သည့်အခါလေယာဉ်ရှောင်ရှား ခရီးသွားလာရန်အခြားနည်းလမ်း ဖြစ်နိုင်သည်မဆိုတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကာဗွန်ခြေရာကိုဖြတ်ဖို့လုပျနိုငျသောအကြီးမားဆုံးတစ်ခုတည်းအရာဖြစ်ပါသည်. လေထုညစ်ညမ်းမှုလေယာဉ်ကိုကျော်ရထားယူခြင်းအားဖြင့်သိသိသာသာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်. အများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများရှိ, ရထားကွန်ရက်များ ကျယ်ပြန့်များမှာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမကြာခဏများမှာ, ဒါကြောင့်သင်နိုင်ပါတယ် ခရီးသွားလာ Eco-friendly ကိုမဆိုယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲ.
Bari ကမီးရထားမှ Foggia
Florence Bari ကမှရထား
Bari ကမီးရထားမှ Naples
လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံရက်သတ္တပတ် secure ရမယ်ဆိုလိုတယ်, သို့မဟုတ်ပင်လအတွင်း, ကြိုတင်မဲအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခရဖို့.
တချို့ရထားလုပ်ရန်သင့်အားလိုအပ်သော်လည်း ကြိုတင်မဲအတွက်ထိုင်ခုံကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု, အများကြီးပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိ, အထူးသဖြင့်သင်သွားလာရန်ဆန္ဒရှိအချိန်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်.
အခုတော့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူပင်သင်၏အလက်မှတ်ရဲ့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုလျှင်, သူတို့သင်သိပါစေနှင့်သင်တစ်ဦးစျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ဖလှယ်ကူညီပေးပါမည်!
စိတ်ကူး ခရီးတာ စောစောနှစ်နာရီရောက်ရှိမည်ရှိခြင်းမဟုတ်, ရှည်လျားသောလုံခြုံရေးအညီစောင့်ဆိုင်း, အတိုင်းအတာ သင့်ရဲ့အရည်နဲ့ gels ထွက်, သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရေးအဘို့သင့်ဖိနပ်ကိုချွတ်ယူ. မီးရထားခရီးသွားလာလောကီသားတို့သည်အမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်. သငျသညျလေကြောင်းခရီးဖြင့်သွားလာသည့်အခါ, ပိုပြီးအချိန်နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများလိုအပ်နေပါသည်. ရထားလမ်းအားဖြင့်ခရီးသွားလာပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကရောက်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ် 30 မိနစ်ရှေ့ဆက်အချိန်နှင့်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့နှင့်ရန်မလိုအပ်မရှိဘဲသင်၏ platform ကိုမှဖြောင့်လမ်းလျှောက် သင့်ရဲ့အဝတ်သေတ္တာထဲမှာစစ်ဆေး, ဒီတော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကိုရထားခရီးစဉ်နဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့ပါတယ်, ရှိရာမီးရထားခရီးသွားလာကိုအနိုင်ပေး!
လေယာဉ်ခရီးသွားနှိုင်းယှဉ်မီးရထားခရီးသွားလာ, မြန်နှုန်း - တံခါးပိုမြန်တံခါးကို
Air ကိုခရီးသွား၏တဦးတည်းဖြစ်လူသိများသည် သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းများ, သို့သော်, ဒီသာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့လေယာဉ်ကိုယ်နှိုက်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်. ဘယ်လောက်ဝေးသင်တို့ပြေး၏ကြိုတင်မဲအတွက်သင်ရှည်လျား check-in များနှင့်လုံခြုံရေးလိုင်းဖြတ်ကူးဖို့ရောက်လာရန်ရှိသည်ဘူး? အကယ်၍ သင်သည်အိတ်တစ်လုံးထဲတွင်စစ်ဆေးပြီးပါကသင်ရောက်ရှိချိန်တွင်ဤစုဆောင်းရန်စောင့်ဆိုင်းရပါမည်၊. လေဆိပ်နှင့်မတူဘဲ, ရထားဘူတာမှာမပါစစ်ဆေးမှုများ-ins သို့မဟုတ်လုံခြုံရေးလိုင်းများရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရှေ့တော်၌ထိုဘူတာရုံနာရီမှာဖြစ်ရန်မလိုပါ ရကွောငျးခရီး. အများဆုံး အဓိကရထားဘူတာ သူတို့ကိုးကွယ်သောမြို့ကြီးများ၏စိတ်နှလုံး၌တရားတည်ရှိသည်. သင်ရထားယူအများအားဖြင့်အခါ,, သင်သည်သင်၏ဦးတည်ရာမှာတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်. သို့သျောလညျး, လေယာဉ်ကိုယူပြီးအားဖြင့်, သငျသညျလေဆိပ်နှင့်ဆီကရတဲ့နာရီပေါင်းများစွာနိုင်.
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, မီးရထားခရီးသွားလာရန် ပို. ပို. ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည် ဘတ်ဂျက် - သတိခရီးသွားများ. တစ်ဦးလေယာဉ်ယူပြီးသော်လည်း သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာ နေဆဲသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိဖို့တခုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ပုံမှန်အားအကောင့်သို့ယူလစျြလြူရှုကြောင်းအပိုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့ mode ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါ, သငျသညျလေဆိပ်နှင့်ဆီကရတဲ့၏အပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအတွက် add ရပါမည်. ဤသည်ဖြစ်စေလောင်စာဆီများနှင့်ယာဉ်ရပ်နား၏ကုန်ကျစရိတ်ကပါဝင်ပတ်သက်, လေဆိပ်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်တက္ကစီခသို့မဟုတ်. အရာတစုံတခုကိုမျှစျေးပေါဖြစ်ပါသည်.
မြူးနစ် Potsdam မှရထား
ဟမ်းဘတ် Potsdam မှရထား
Frankfurt Potsdam မှရထား
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားများအတွက်ပေးဆောင်ကြမဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့အာကာသများသောအားဖြင့်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံထိုင်ခုံပေါ်ကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်. ရထားတွင်, သင်ပိုမိုလွတ်လပ်စွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်, သင့်ထိုင်ခုံန်းကျင်ကိုပိုပြီး legroom ရပါလိမ့်မယ်. သင်တို့ပြေးစဉ်အတွင်း, ထိုင်ခုံခါးပတ်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ကို turn off ရန်အဘို့အသငျသညျစောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, ရထားပေါ်တွင်သင်တန်းမှာဆင်းရွှေ့, တစ်ကိုက်သို့မဟုတ်ကော်ဖီဖမ်းဆုပ်, ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်နေတာလား. တစ်ဦးက သာယာလှပရထားစီးနင်း တောင်အားလပ်ရက်နိုင်ပါတယ်. ဥရောပရထားအများစုမှာအခမဲ့ WiFi လည်းပါရှိသည်။ လူတိုင်းအတွက်မပြောရသေးပါ လေကြောင်းလိုင်းများ.
မီးရထားခရီးသွားလာကိုလည်းသင်သည်သင်၏ adored အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အငြိမ့်သွားလာခွင့်ပြု. အတော်များများကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုလေကြောင်းခရီးသွားလာမှုမှကိုက်ညီကြသည်မဟုတ်, အသက်, သို့မဟုတ်ဖောက်.
အပေါ်ခရီးသည် ဥရောပရထား ခွေးကိုယူစေခြင်းငှါ, ကြောင်, နှင့်အခြား သေးငယ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်များ အဘယ်သူမျှမအပိုကုန်ကျစရိတ်မှာသူတို့နှင့်အတူနှင့်အချိန်အများစု!
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့သမျှသောဤအချက်များယူပြီး, မီးရထားခရီးသွားလာယနေ့ ပို. ပို. ကြီးစိုးလာပုံကိုကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်. လေယာဉ်အဝေးနိုင်ငံများမိုင်မှသငျသညျအရအဆင်ပြေများမှာ. သို့သျောလညျး, သင်သည်ဥရောပသို့မဟုတ်အခြားဒေသများသို့ခရီးသွားလာလျှင်အကောင်းဆုံးရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူ, ရထားခရီးသွားပို့ဆောင်ရေး၏ပိုပြီးထိရောက်နှင့်အဆင်ပြေ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်ယခုကျနော်တို့လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုနှိုင်းယှဉ်မီးရထားခရီးသွားလာအတွက်ဆုရှင်ကောက်ချက်ချကြောင်း, ယင်းကိုရှာဖွေ အကောင်းဆုံးရထားကိုပုံမှန်အတိုင်း ဥရောပမှာ, အလည်အပတ် တစ်ဦးကရထား Save.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, နောက်ဆက်တွဲ Facebook တွင်ရထားတစ်ခုသိမ်းဆည်းပါ, Instagram ကိုအကောင့်ကို, နှင့် တွစ်တာ အကောင့်များ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / nl သို့မဟုတ် / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / pl ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
လေယာဉ်ပျံ planetravel ရထားခရီးသွား